August 2013 ~ Tech in Blogging
Facebook ပေါ်တွင်လှုပ်ရှားနေသောပုံများတင်နည်း (Ebook မြန်မာလို)
22:10 Pyae Phyo 1 comment
မင်္ဂလာပါ။ Tech in Blogging မှကြိုဆိုပါတယ်။ Facebook ပေါ်မှာထုံးစံအတိုင်း gif ပုံ animation ပုံတွေတင်လို့မရပါဘူး။ တင်လို့ရအောင်လည်း Facebook ကလက်မခံပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့မှာ တင်လို့ရအောင်လုပ်တဲ့နည်းရှိပါတယ်။ အဲ့နည်းကိုတော့ အတိအကျ သိချင်ရင်တော့ အောက်ပါလင့်တွေအတိုင်း Ebook ကို Download ဆွဲလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်စုစည်းဝေမျှထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပြီး နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းတို့ဆိုဒ်မှာလည်း ဝေမျှလိုက်ပါဦးနော်။
Top 10 Global websites (နာမည်အကြီးဆုံး ၀ဘ်ဆိုဒ် ၁၀ခု) in 2013
17:29 Pyae Phyo 1 comment
မင်္ဂလာပါ။ Tech in Blogging မှကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ခုလူတွေအားလုံးသိအောင် ၂၀၁၃ မှာ နာမည်ကြီး ၀ဘ်ဆိုဒ် ၁၀ခု ကိုပြဦးပါမယ်ဗျာ။ Screenshot နှင့်တကွကြည့်ပါ။ အားလုံးသိအောင်လည်း ဝေမျှလိုက်ဦးနော်။ ထိပ်ဆုံးက တင်ထားတဲ့ဆိုဒ်က နာမည်အကျော်ကြားဆုံးပေါ့။ ကဲ လေ့လာကြစို့။
ခုလူတိုင်း မရှိမဖြစ်သုံးနေတဲ့ အင်တာနက်သွေးကြော Google Search Engine ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုအသုံးများပါတယ်။
Facebook ဆိုတာက အလွယ်တကူလူမှုကွန်ယက်တစ်ခုပါ။ ၂၀၀၄ မှ စတင်တည်ထောင်တာဖြစ်ပြီး Mark Zuckerberg မှ တည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူက ဒုတိယ နာမည်ကျော် ၀ဘ်ဆိုဒ်အဖြစ်တည်ရှိနေဆဲပါ။ Facebook ကိုကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေလည်း အသုံးပြုပါတယ်။
၂၀၁၁ ကစပြီး မြန်မာနိုင်ငံကစပြီး YouTube တို့ကို Access Denied အဖြစ်မှ လွှတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးခဲ့ပါပြီ။ ခုလူတိုင်းလည်း Tutorials | Game cheats | MTV | Series | Film စသဖြင့် ပါသော ဗွီဒီယိုများ အလွယ်တကူတင်ခွင့်နှင့် ကြည့်ခွင့်များရှိပါတယ်။ YouTube က Google ရဲ့ အမျိုးစုထဲမှာ ပါပါတယ်။
Yahoo! ကို ထောင်တာ ၂၁ နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ Google မစမီကတည်းက သူက နာမည်ကြီးနေခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေအရမ်းအသုံးနည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Yahoo! ကနာမည်ကြီး စတုတ္တ၀ဘ်ဆိုဒ်နေရာမှာ တည်ရှိနေဆဲပါ။
တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ အင်တာနက်ရှာဖွေရေးသွေးကြောတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Baidu Search Engine ပါ။ တရုတ်ဟန်းဆက် (Android version) တွေရဲ့ Browser တွေမှာလည်း Baidu Search Engine ပါပါတယ်ဗျာ။ Baidu ဆိုတဲ့နာမည်က ဘီစီ ၈၀၀ ကတည်းက သုံးခဲ့တာ ခုထက်ထိ နာမည်လှလှလေးဖြစ်နေဆဲပါ။
Wikipedia က စာပေ၊ သမိုင်း၊ ပထ၀ီ အစုံစုံလေ့လာလို့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုဝင်ကြည့်ပြီး Project အဖြစ် လုပ်တယ်။ ဝေမျှကြတယ်လေ။ ဘာသာမျိုးစုံနှင့်လည်း သင်လိုရာကိုဖတ်နိုင်ပါပြီ။
QQ က တရုတ်လူမျိုးရဲ့ အင်တာနက်သွေးကြောနောက်တစ်နေရာမှာပဲဗျာ။ Yahoo! ရဲ့ပုံစံအသွင်ကိုခိုးယူထားတဲ့ QQ တရုတ်ထုတ်ပါ။ Search Engine ဆိုပေမယ့် တရုတ်လိုနားလည်သူတွေပဲ သုံးကြပါတယ်။
ဆက်သွယ်ဖို့ကွန်ယက်တစ်ခုပါ။ လင့်တွေပါတွေ share လို့ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးနည်းပါတယ်။
အွန်လိုင်းမှာအလွယ်တကူ သင်လိုချင်ရာ ၀ယ်နိုင်မယ့် Online ဈေးကွက်ပါ။
10) Windows Live
MSN အကောင့်ကိုဝင်ရမယ့်နေရာပါ။ ပြီးတော့ သူက Microsoft ရဲ့ဆွေမျိုးတော်တွေပါ။
22:20 Pyae Phyo No comments
မင်္ဂလာပါ။ Tech in Blogging မှကြိုဆိုလျက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ Gtalk ထဲမှာ အထူးအဆန်းပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ခက်ခဲနေမှာပါ။ အဲ့ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဒီစာအုပ်ထဲမှာ နည်းလမ်းလေးတွေရေးထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာ font (Zawgyi-One) ကိုအခြေခံပြီးရေးထားပါတယ်။ ရေးထားတာတော့ကြာပါပြီ။ ခုမှစက်ပေါ်ပြန်ရောက်လို့ တင်ဖြစ်တာပါ။ သင့်ရဲ့စက်အတွက် အကူအညီဖြစ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Ebook ရေးပြီး အပင်ခံကြိုးနပ်ပါတယ်ဗျာ။ ခု အောက်ပါလင့်အတိုင်း Download ဆွဲလိုက်ပါဦး။
တခြား Ebooks များကို ဖတ်လိုလျှင် ဒီကိုကလစ် ခြင်းဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Professional Domain ပိုင်ဆိုင်သူများသိသင့်တယ် - http://techinblogging.blogspot.com/2013/08/website-domain-ebook.html မှာဖတ်ပါ။
18:44 Pyae Phyo No comments
Tech in Blogging Pro
1 Sidebar,2Column,3Column footer, Adapted from WordPress, Black, Elegant, Featured Section, Fixed width, Fresh, Grey, Magazine, Orange, Premium, Right Sidebar, Rounded corners, Slider, Tabbed widget, Top Navigation Bar, Web 2.0, White, Author box, Page Numbers Navigator, SEO Optimized
Author Name and URL :
YGNBlogger / http://techinblogging.blogspot.com
Original Designer URL :
You can addaheader logo for this template easily in the "Layout" section (Blogger Default Method).Logo image size must be 257px width and 54px height.
How To Edit Author Box
ပြင်နည်းကတော့ လွယ်လွယ်လေးပါ။ Blogger >> Settings >> Posts and Comments >> Post Template မှာ ကျွန်တော်အောက်ပါပေးတဲ့ကုဒ်အတိုင်းထည့်ပါ။
<img class="Tech in Blogging" height="59" src="ဒီမှာသင့်ပုံထည့်" />
သင်အကြောင်းမိတ်ဆက်ပါ။ မြန်မာလိုဖြစ်ဖြစ် English လိုဖြစ်ဖြစ် ရေးနိုင်ပါတယ်။
ပြီးရင် Save settings ကိုကလစ်ပါ။
Please do not remove the footer credit. I spent several hours to create this blogger template. So that you can use it for your blog. All I ask is, stay the credit intact. If you remove the footer credit, it's becoming your one of your own templates. However, if any problems come due to the template, I will not solve and handle any of your questions.
နောက်လည်း Blogger Templates တွေကို share ဦးမှာပါ။ မျှော်။ ဒီ Template ကအရင်တုန်းက ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာသုံးတဲ့ Template ပါ။ ခု သူများတွေကပါ တောင်းဆိုနေလို့ share ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ။ Contact form (သို့မဟုတ်) ppt1459@gmail.com ကိုအပ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Windows Update ကြောင့် Shut down ချကြာရတဲ့ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနည်း [Windows XP only]
22:06 Pyae Phyo No comments
မင်္ဂလာပါ။ Tech in Blogging မှကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ Windows XP သမားတွေအတွက်ပါ။ :P ။ သူလည်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲ။ ကဲကြည့်ကြရစို့ပေါ့ဗျာ။
ဖတ်သင့်တယ် >> Windows Update ကြောင့် Shut down ချကြာရတဲ့ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနည်း [Windows XP only]
ကဲ။ ကျွန်တော်ဝိုင်းထားတဲ့အတိုင်း Restart ပေးလိုက်ပါ။ စက်ပြန်တက်လာတဲ့အထိစောင့်ပြီးရင် Shut down ပေးရင် သင့်စက် Shut down ကျမှာ မကြာတော့ပါဘူး။
Windows Update ကြောင့် Shut down ချကြာရတဲ့ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနည်း [Windows7only]
11:59 Pyae Phyo No comments
မင်္ဂလာပါ။ Tech in Blogging မှကြိုဆိုပါတယ်။ ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပိုစ့်အမြည်းကတော့ Blogging နဲ့ပတ်သတ်တာတွေမဟုတ်ဘဲ PC နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ Tips and Tricks ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့တော့ PC Tricks and Tips ဆိုတဲ့ tag အသစ်ဖောက်လိုက်ပါပြီ။
အပြင်မှာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မေးတယ် သူ့စက်က Windows7ပါ။သူ့စက်ကို Windows Update က ခဏခဏလာတယ်။ ဒါပေမယ့် Shut down ချလိုက်ရင် စက်က မီးလင်းပြီး Updating အနေနဲ့ စက်မကျတော့ဘူးလို့ပြောတယ်။ ဒါကြောင့် နည်းလမ်းတစ်ခုရှာပေးထားပါတယ်။ Windows XP အတွက်ကတော့ နောက်မှပေါ့။ :)